Somaliland.Org » Dukaankaygu sow nabadda ma iibiyo?
Dukaankaygu sow nabadda ma iibiyo?
April 29th, 2008 Comments Off Dukaankaygu sow nabadda ma iibiyo?
Maalintii la ii keenay waxa aan mooday in ay miridh kasta wax noqon karto. Waxa la iigu dhiibay kartuush si cad loogu muujiyay ‘Walax jabi og, fadlan dhankan u taag’. Tabtii la iigu sheegay, ee aan farriinta meesha ku qoranna ka akhriyay ayaan kartuushkii u qotomiyay.
Habeenkii koowaad ee kartuushkaasi u hoydo dukaankayga il iyo baal isuma keenin, waan werweray, aroortiina neef weyn baa iga soo boodday markaan hubsaday inuu weli halkiisii yaallo oo sidii kor ugu jeedo. Habeenkii xigay tabtii oo kale, oo kii xigay, oo toddobaad iyo mid kale, iyo bil iyo sannad iyo sannado badan, kartuushkii halkiisii uun buu soo yaallaa, kor u jeedaa, waxba kuma kordhaan waxna kama dhacaan.
Aroortii dambe ayaa waxa booqasho kedis ah iigu yimi Fajac, oday aannu weligayo jaar ahayn se aan meheradda sidii aan u furay food soo gelin. Waa Fajac oo naaxay, aad u naaxay, kolkii hore inuu bararay ayaan mooday, markii se aan neefneefsigiisa iyo kelyaha xaydhu haraacyaynayso arkay ayaan gartay sida xaajo tahay, ninkuba wuxuu la cifanayaa baruur.
“Waar Daahir bal warran?” ayuu cod dirqi kaga soo baxay igu bariidshay, oo kadinkii dukaanka isku soo maqiiqay.
“Waa nabad Fajac ee soo dhaaf”
“Oo maxaan soo dhaafaa meeshu waa cidhiidhiye, maxaad albaabka intan le’eg meheradda ugu samaysay?” ayuu isaga oo hadba sin kadinkii ku soo jujuubaya yidhi. Waxa aan ku sigtay inaan idhaahdo ‘adigu maxaad sidaas ugu naaxday? Sow tan magaaladu wada caatada engegan ah, ma guurti baad noqotay?’ Haddana kuma aan dhicin, waxa aan is idhi ninkaas macmiisha cusub ah ha iska eryin, waxa kale oo aan ka werweray in aan nabadda dukaanku hayo waxyeelleeyo.
“Soo fadhiiso Fajac” ayaan ku idhi oo caagad kuwa saliidda ah oo ii kursi ahayd uga kacay.
“Waar miyaan meesha kursi kuu oollin?” ayuu igu yidhi.
“Maya, laakiin jawaan baan dhulka kuu gogli karaa”
“Sidaas baa la qaatay” intuu yidhi ayuu isaga oo gacantiisa midig cuskanaya sidii dayuuradihii Ruushka ee taangiyada waaweyn qaadi jiray si laxaad leh, se hab iyo maamul ka muuqdo dhulka u badhi dhigtay.
Uuuuf! Naqas baa iga soo booday, in odaygaas dhulka ku sii socdaa habaas kiciyo oo habaaskaasi nabadda kartuushka shelefka saaran ku jirta waxyeelleeyo ayaan ka baqayay, ma se dhicin. Mijin xun oo baarixi u eg ayuu docda kala soo baxay oo halkan barbarkiisa ah ku daadsaday. Intii uu meesha fadhiyay qof keli ahi dukaanka ma soo gelin kolka laga reebo gabadh xarragoonaysa oo afka iyo wejigaba casaysatay oo intay soo gashay xammuurad, diyaana iyo qasil i weydiisay, markaan idhi ma hayona degdeg u baxday.
“Ma Xaraf baan ku arkay mise Hargeysa Kilaab?” ayuu aniga oo aan fahmin waxa uu ujeedo i weydiiyay. Aniguna baqdin aan ka qabo in aan nabadda waxyeelleeyo awgeed ayaan ku idhi: “Labadaba”
Beryahaas odaygu i bartay ayaa laba yaryar oo ciyaal ahna la igu salliday. Dukaanka kadinkiisa iyaga oo ku gabbanaya ayuun baan maalinwalba arkaa. Maalintii dambe ayaan meel rukun ah ugu gabbaday oo mid ka mid ah dhab siiyay. Qaylo ayuu ka tolay.
“Maxaa dukaankayga kugu salliday?” markaan idhi, “bisadda soo gashay ayaannu eryanaynay” ayuu iigu warceliyay. “Aabbahaa iyo bisaddaba kud ee maalin dambe haddii aan dukaankayga kadinkiisa kugu qabto waad arki doontaa” ayaan ugu hanjebay oo sii daayay.
“Way inoo tahay” ayuu iigu hanjebay isna. Armuu dayuuskaas yari nabadda waxyeelleeyaa, ayaan ku fekeray. Waa Fajac haddana, wuu sii naaxay, intii toddobaad ka hor aan ku ogaa saddex laabkeed ayuu le’eg yahay, waar sidaas maxaa ka dhigay ayaan is idhi.
“Waar Daahirow bal warran?” ayuu igu bariidshay.
“Nabad weeye Fajac” waxa aan ka yaabay jawaanka qaadi doona ee uu mijintiisa dayuusadda ah ku cuni doono maanta.
“Waar sidani si maaha ee meheradda laba ferdedood ka dhig” ayuu talo igu siiyay. Oo ma adigaa macmiil laba ferdedood ka soo gashaba haysta, muxuu kaa waalayaa tolow.
Maalintaas dukaanka kadinkiisa ayuu iskaga qayilay, aniguna arrinkii labada ferdedood ayaan aad uga fekeray. Sidani si aan ku jiri karo maaha, haddii uu Fajac booqashada badiyo, maalinwalbana baruur hor lihi sii fuusho, miyaad jawaan debedda loo dhigo ku wadi karaysaa? Sow arrintaasi nabadda waxyeellaynmayso? Hammigaas aniga oo maskaxdayda ku kobcinaya ayaa labadii dayuus ee yaryaraa halkaas ka soo muuqdeen. Waa la jabay, dukaanka kadinkiisu wuu furan yahay, haddii ay dalaq yidhaahdaan oo halkaas nabaddu saaran tahay toos u abbaaraan sow meeshaas ceebi ka dhicimayso, ka hor tag ayaan go’aansaday. Dhenged halkan iigu tiirsan ayaan la balaw idhi oo ciyaalkii cagta cagta u saaray. Cabbaar markaan eryay ee Oryantalka weydaariyay ayaan iskaga soo hadhay.
“Waar maxaa kula haaday?”
“Kuwaas yaryar ee dayuusiinta ah ayaa i ogaaday oo aan dukaanka ka eryayaa”
“Dee bisaddooda usoo saar”
“Tii dukaanka gashay”
Waar odaygu miyuu waashay, oo sowdigii kadinka eegayay maaha ma bisad baa ku dhaaftay. Waar wuu indhadarreeyay odaygu.
“Adeer bisadi inama dhaafin”
“Jaw, wallaahay dukaankay ku jirtaa”
Waa la ba’ay, haddaa nabaddii go’day. Intaan hararaf idhi ayaan dukaankii isku shubay mise wallaahay bisad barabaro leh oo dhako buuran ayaa shelefkii nabaddu saarrayd dul yuururta.
Qaaaaaaaaaaaaaaaq budh halkan ii yaallay ayaan kula haliilay oo is idhi madaxa dhalfiifaha kaga dhig, oo waa bisade way ii jartay, oo aan nabadda agteedii ku bashaaqiyay. Naxdin baa wadnihii iskay taagi gaadhay.
Miyaaaw! Halkaas meel ah ayay indho guluub shidan la moodo igaga soo ifisay. Budhka kula kac ayaan ka fekeray, misna xusuustay ceebtii aan meesha ka dhigi gaadhay. Wax aan sameeyo aniga oo garan la’ ayuu Fajac oo debedda fadhiyaa ii dhawaaqay:
“Waar Daahir maxaa ku helay ee aad la sanqadhaysaa?”
“Fajacow waa bisaddii oo aan isleeyahay dukaanka ka saar”
“Waar bisaddu jiirka meesha ka soo galay bay eryanaysaa ee iska daa oo soo fadhiiso”
Fajac fajac badanaa, ma jiir baa dukaankayga ku jira. Aniga oo yaabban ayaan iska soo fadhiistay. Kolkaan salka dhigay ayaa bisaddii oo soconaysaa i dhaaftay. Markay du